IPhone Common Email xiriira Dhibaatooyinka iyo Siyaabaha la isu saxaan
IPhone noqday hit deg dega ah maxaa yeelay waxa ay bixisaa isku darka ugu fiican ee madadaalada, isgaarsiinta, iyo codsiyada xirfadeed. Codsiyada Emails yihiin qaar ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalay iPhone. Bal aan eegno arrimaha la xiriira email qaar ka mid ah ay la kulmaan dadka isticmaala iPhone.
1. Email address diiday server
Tani waxay soo jeedinaysaa in ID email iyo password in aad ka galeen goobaha ay run ma aha. Si taas loo xaliyo, guji goobaha> mail> account email dooro> account tuubada> goobaha isbedel. Gala goobaha saxda ah qaabeynta iyo guuleysatey app iPhone email ah.
2. ma heli karaa email
Haddii in-kasta oo galaya cinwaanka email sax ah iyo password, haddii aad hesho "ma heli karo mail" Baadi, waxaa lagu talinayaa inaad la xiriirto bixiyaha adeegga email si loo hubiyo sababta keentay in arrinta.
3. Phone ku guuldareysto in ay helaan emails cusub marka user waa helitaanka mailkooda email ka qalab badan
Waxaad ka shaqeeya ID email aad adiga oo isticmaaleya isticmaale PC, iyo email cusub yimaado. Laakiin, email isla kama muuqato in app iPhone. Tan waxaa loo yaqaan multi qalab-quful-baxay. Ma aha oo kaliya email macaamiisha, laakiin xitaa barnaamijyadooda bulshada oo kale ah ee Twitter ma soo wargelin ku saabsan farriimaha cusub haddii aad gasho in la isticmaalayo qalab kala duwan.
4. Email sanduuqa muuqataa xayiray
Tani waxay dhici kartaa ka dib rakibidda updates software qaarkood. Ikhtiyaarka ugu fiican waa in ay qabtaan telefoonka ee button guriga dhowr ilbiriqsi inuu ka baxo codsiga, ka dibna, guuleysatey telefoonka. Ka dib markii in, furto codsi email ah mar kale.
5. Server ma ogola in ay sidayaan
Dadka isticmaala iPhone arrintan wajihi halka isticmaalaya xisaab AOL ay qalab, gaar ahaan, ka dib markii ay resetting iPhone. Tag goobaha> mail, xiriirada, jadwalka> ka dibna dooro account AOL, oo ​​guji server xilka mail (SMTP). Dooro server aasaasiga ah, oo ku qortaa erayga sirta username aad xisaab AOL in xilka server mail faahfaahin bannaan. Tani waa is ogow of dhibaatada.
6. barnaamijyadooda Mail sii wateen
Dhowr iPhone 4 iyo 5 iPhone users arrintan ayaa sheegay in ka dib markii la sii daayo macruufka 8. User forums soo jeedinaynaa in inta badan iPhone 4 iyo 5 users ku saabsan qaab tartiib ah u app fariin, barnaamijyadooda email, camera iyo Safari browser caban. Khubarada ayaa soo jeedinaya in macruufka 8.3 update ayaa la daryeelo dhibaatooyinkan. Laakiin, haddii aad weli haysataa arrimaha, ikhtiyaarka ugu fiican u noqon lahaa uninstalling macruufka 8 iyo dhaqaaqo qoraalkii hore ku haboon ee nidaamka qalliinka dib.
7. Arrimaha la email app Yahoo on iPhone
Tan iyo November 2014, dad badan oo Yahoo macruufka users mail app sheegay arrimaha la xiriira qaab app ee. App waxa uu ahaa hoos maalmo dhowr ah oo u dhexeeya November sanadkii la soo dhaafay iyo May 2015. Nasiib wanaag, Yahoo ayaa dhawaan ku dhawaaqay in shirkadda ayaa go'an arrintan. Sidaas, haddii aad soo food saartay arrimaha la email app Yahoo, hubi in aad qabto nooca ugu dambeeya ee codsiga.
8. awoodin in ay tirtirto email
Dhowr users ayaa sheegay arrintan oo ku saabsan awood la'aanta in ay tirtirto emails-dhaqaaqa iyo iyaga qashinka. Inta badan dadka isticmaala heli "Ma awoodo in uu u dhaqaaqo fariin ah in qashinka" qalad. Arrintan waxaa keenay mar kale ka dib markii la bilaabay ee macruufka 8.1. Habka ugu fiican ee ay u maareeyaan dhibaatadan waa ay fudud tirka email u qaabeynta iyo resetting xisaabta.
Talooyin si uu u xaliyo dhibaatooyinka la xiriira email iPhone
• Hubi in aad network telefoonka gacanta ama xiriir Wi-Fi
Xusuusnow, barnaamijyadooda aad telefoonka ee u hagaagsan doonaa emails kaliya haddii qalabka ku xiran internetka. Hubi in app la cusbooneysiiyaa. Haddii aad dareento in aadan helaya emails aad telefoon, talaabada ugu horeysa ee aad u baahan tahay in aad qaadato waa hubinta telefoonka gacanta ama network Wi-Fi. Ka dib markii in la hubiyo in qalabka la xiran internetka, furo goobaha email ugu app walaacsan iyo raaxayn app.
• goobaha Check email u POP3
Riix goobaha> ka dibna riix mail, xiriirada, jadwalka> gura xogta cusub> guji gura oo ay la socoto muddada for isku mid. Doorashada Doorashadan Hubi in ka dhigi doonaa in jeegaga telefoonka aad emails cusub ka dib markii dura iyo downloads emails cusub ee joogtada ah.
• dib u app email walaacsan
Mararka qaarkood, codsiyada joojin kartaa helo emails cusub ka server ay sabab u tahay app dejinta arrimaha la xiriira. Tani waxay sidoo kale ku dhici kartaa haddii aad ku guuldareysato inay soo dajiyo updates u barnaamijyadooda aad mar kasta soo diray sameeysa app. Habka keliya ee lagu xallin arrintan waxaa uninstalling codsi ka dibna waxaa mar kale ku rakibidda daqiiqado yar ka dib. Ka dib markii ay ku rakibidda, hubi in aad gali cinwaanka email sax ah iyo password ee koontada walaacsan.
• Dib-u-geli magacaaga iyo isgarad in app
Mararka qaarkood, ay sabab u tahay arimo farsamo, macaamiisha email si toos ah aad saxiixdo soo xisaab email aad. Sidaas, mar kasta oo Chine email aad joojiso degsado emails ugu dambeeyay, waa in aad Logout, iyo isku day in aad gashid mar kale galay oo aad magacaaga iyo isgarad.
• Ka hubi kooxda IT xafiiska haddii aad ID rasmiga ah waa dhibaato soo food saartay
Haddii reentering password username ama hubinta xiriirinta goobaha uma shaqeeyo, tallaabada xigta waa wacaya kooxda IT xafiiska si ay u hubiso in ay jiraan arrimo wax u socdaan server email. Fiiri haddii ay jiraan wax isbeddel ah ee qaabeynta.
• Hubi haddii adeeg bixiyaha email uu ku meel gaar ah hor istaagay xisaabtaada
Bixiyeyaasha adeegga Email sida Gmail bixiyaan ilaalinta ugu badan ka tuugada. Sidaas, mar kasta oo Gmail ogaadaa user login meel aan la aqoonsan (qalab la aqoonsan), waxaa si ku meel gaar xirto laga yaabaa in xisaab email aad. Xaaladdan oo kale, ma heli doontid emails socda oo cusub ku iPhone iyo sidoo. Sidaas, haddii aadan helaya emails aad aad app, waa inaad isku daydaa in ay gasho si xisaab email ka web browser. Haddii bixiyaha adeegga email ayaa naafo xisaabtaada, waxay muujiyeen lahaa wargelinta ah ee la mid ah marka aad gasho ka browser ah.
Waxaad hawlgelisay kartaa xisaabtaada adigoo raacaya talaabooyinka xaqiijinta fudud gaar ah. Marka xisaabtaada waa firfircoon, waxay noqon lahayd inaad hawgu aad magacaaga iyo isgarad cusub ee goobaha iPhone inay ka soo kabanaya hesho email app aad.
Top 4 Siyaabaha Factory celi iPhone
> Resource > iPhone > Common iPhone Email xiriira Dhibaatooyinka iyo Siyaabaha la isu saxaan